ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့မှာ မြင်တဲ့သူတိုင်းအံ့သြသွား လောက် တဲ့ပုံလေး ပြုလုပ်ကာတင်ပေးလာတဲ့ နေဒွေးရဲ့ ချစ်သူ ကောင်မလေး – XB Media Myanmar
ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့မှာ မြင်တဲ့သူတိုင်းအံ့သြသွား လောက် တဲ့ပုံလေး ပြုလုပ်ကာတင်ပေးလာတဲ့ နေဒွေးရဲ့ ချစ်သူ ကောင်မလေး
ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့မှာ မြင်တဲ့သူတိုင်းအံ့သြသွားလောက်တဲ့ပုံလေး ပြုလုပ်ကာတင်ပေးလာတဲ့ နေဒွေးရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး….
နဒွေးဆိုတာနဲ့ တစ်ချိန်က video ဇာတ်ကားတွေခေတ်မှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူက တော့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရာ ဇာတ်ရုပ်မှာ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူ့ရဲ့ဇာတ် ကားတိုင်းကို တစ်ခဲနက် အားပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်ကာလအခြေနေတွေကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေခဏနားထားချိန်လေးမှာတော့ သူဟာ Liveလွှင့်ပြီး စျေးလေးတွေရောင်း နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုချစ်ပြီး အားပေးဝယ်ယူတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများအပြားပါပဲ။ဒီနေ့ကတော့ အဲ့လို ပရိသတ်အချစ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မင်းသားချောလေး နေဒွေးရဲ့မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မွေးနေ့မရောက်ခင်ညလေးမှာကတည်း သူ့ရဲ့ချစ်သူကနေပြီးတော့ လူမှုကွန်ရက်မှာ video လေးနဲ့အကြိုဆုတောင်းပေးထားတာပါ။ အဲ့ video လေးမှာတော့နေဒွေးရဲ့ချစ်သူလေးက နေဒွေးပုံကိုအသက်ကြီးတဲ့ပုံပြင်ပြီး စနောက်ထားတာပါ။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ် လောက်ချစ်ပြီးစနောက်နေကြလဲဆိုတာတော့ အောက်က ဆေး Birthday Wish video လေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်။
ခ်စ္သူရဲ႕ေမြးေန႔မွာ ျမင္တဲ့သူတိုင္းအံ့ၾသသြားေလာက္တဲ့ပုံေလး ျပဳလုပ္ကာတင္ေပးလာတဲ့ ေနေဒြးရဲ႕ ခ်စ္သူေကာင္မေလး….
နေဒြးဆိုတာနဲ႔ တစ္ခ်ိန္က video ဇာတ္ကားေတြေခတ္မွာ ပရိသတ္အခိုင္အမာနဲ႔ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ မင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။သူက ေတာ့ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရာ ဇာတ္႐ုပ္မွာ ပီျပင္စြာသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြကလည္း သူ႔ရဲ႕ဇာတ္ ကားတိုင္းကို တစ္ခဲနက္ အားေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေခတ္ကာလအေျခေနေတြေၾကာင့္ အႏုပညာအလုပ္ေတြခဏနားထားခ်ိန္ေလးမွာေတာ့ သူဟာ Liveလႊင့္ၿပီး ေစ်းေ လးေတြေရာင္း ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။သူ႔ကိုခ်စ္ၿပီး အားေပးဝယ္ယူတဲ့ပရိသတ္ေတြလည္းအမ်ားအျပားပါပဲ။ဒီေန႔ကေတာ့ အဲ့လို ပရိသတ္အခ်စ္ေတြသိမ္းပိုက္ထားတဲ့ မင္းသားေခ်ာေလး ေနေဒြးရဲ႕ေမြးေန႔ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ေမြးေန႔မေရာက္ခင္ညေလးမွာကတည္း သူ႔ရဲ႕ခ်စ္သူကေနၿပီးေတာ့ လူမႈကြန္ရက္မွာ video ေလးနဲ႔အႀကိဳဆုေတာ င္းေပးထားတာပါ။ အဲ့ video ေလးမွာေတာ့ေနေဒြးရဲ႕ခ်စ္သူေလးက ေနေဒြးပုံကိုအသက္ႀကီးတဲ့ပုံျပင္ၿပီး စေနာက္ထား တာပါ။တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဘယ္ ေလာက္ခ်စ္ၿပီးစေနာက္ေနၾကလဲဆိုတာေတာ့ ေအာက္က ေဆး Birthday Wish video ေလးကိုၾကည့္ၿပီးအားေပးၾကပါဦးေနာ္။
ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတာတောင် အလှမပျက်ဘဲ လွတ် လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ကြွေချင်စရာကောင်း လွန်း နေတဲ့ အောန်ဆိုင်